Rohato DMBA vita (71776-70-0) - Phcoker Chemical
SKU: 71776-70-0 Sokajy: Weight Loss
Rohan 4-Methyl-2-pentanamine hydrochloride (DMBA) poids (71776-70-0) video
Product Name Roahina 4-methyl-2-pentanamine hydrochloride (DMBA) poids
Anarana simika 1,3-dimethylbutylamine hydrochloride; 2-pentanamine, 4-methyl-, hydrochloride (9CI)
Brand Name Tsy misy angona azo atao
Drug Class manaitaitra
molekiolan'ny Formula C6H15N.HCl
molekiolan'ny Wvalo 137.65
mitsonika Point 110-120 ° C
Solubility Tsy voapoizina ao anaty rano ary tsy azo avela amin'ny alikaola, solvent solika
Storage Temperature toerana
Application ampiasaina ao amin'ny kilasin-danja izay ahafahanao manamaivana ny fiantraikan'ny alahelo vokatry ny hafanana vokatry ny hafanana.
Raw 4-Methyl-2-pentanamine hydrochloride (DMBA) poids (71776-70-0) Description
Ny ADN 4-Methyl-2-pentanamine hydrochloride (DMBA), pharmaceutique intermediates, système biologique tsara sy catalyst, vokatra fitsaboana, sns. Amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana, ny hydrochloride 1,3 - dimethyl amine dia afaka mampitombo ny heriny, mamelombelona, ny angovo na ny kaloria afenin'ny atleta dia manangona angovo manokana mahomby. Mampiasaina ao amin'ny kilasy fahabetsany izay ahafahanao manamaivana ny fiantraikan'ny lozan'ny hafanana vokatry ny hafanana. Misy tatitra momba ny hydrochloride 1,3 - hydrochloride dia mety hampitombo ny hatsaran-tarehy, hanatsara ny fifantohana, hanafoana ny fialan-tsasatra, manakana ny fientanentanana . Azo ampiasaina amin'ny kafeinina sy ny zavatra hafa amin'ny sakafo fanampiny ihany koa.
Fampiharana ny vovoka hydrochloride 4-Methyl-2-pentanamine (DMBA) (71776-70-0)
Ho an'ny famarotana pharmaceutique, fitaovana ara-organika tsara sy catalyst, ary vokatra hafa momba ny fitsaboana.
Mamono vokatra ara-pahasalamana
Ny tombom-pihetseham-bolan'ny 4-methyl-2-pentanamine (DMBA) (71776-70-0)
Amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana, ny hydrochloride (DMBA) 4-Methyl-2-pentanamine (DMBA) dia afaka hampitombo ny angovo, ny famelomana ary ny fanatsarana ny angom-batan'ny kôlejy, na ny ateraky ny famerana ny kaloria manangona angovo mahomby.
Ho an'ny fatiantoka mavesatra, ny fampiasana ny ephedrine 4-Methyl-2-pentanamine hydrochloride (DMBA) amin'ny efitrano mitovy amin'ny cAMP ao amin'ny vatana dia afaka manatsara, mampiroborobo ny fatiantoka ny vatana.
4-Methyl-2-pentanamine hydrochloride (DMBA) amin'ny famarotana ny vokatra ara-pahasalamana izay ahafahanao manamaivana tanteraka ny fitsaboana aretin-tsaina.
Ny 4-Methyl-2-pentanamine hydrochloride (DMBA) dia afaka mampitombo ny fahatsapana ara-batana, manatsara ny fifantohana, tena manakana ny fientanam-pandrenesana fanavakavahana.
4-Methyl-2-pentanamine hydrochloride (DMBA) koa misy orinasa misy kafeinina sy ireo zavatra hafa entina toy ny fifangaroan'ny sakafo fanampiny.